Mi Band3မှာ IP67, Touchscreen Display, Gesture နဲ့ NFC စနစ်တွေပါဝင်လာဖွယ်ရှိ
Mi Band3မှာ IP67၊ Touchscreen Display၊ Gesture နဲ့ NFC စနစ်တွေပါဝင်လာဖွယ်ရှိ
30 Apr 2018 . 4:47 PM
Xiaomi ရဲ့ CEO Lei Jun ဟာ Black Shark Gaming Phone ကိုမိတ်ဆက်တုန်းက အမျိုးအမည်မသိ Smartband တစ်ခုကိုဝတ်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Smartband ဟာ Mi Band3ဖြစ်နိုင်ဖို့သေချာသလောက်ပါပဲ။
Xiaomi ဟာ Mi Band3နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Official Teaser တစ်ခုကိုမကြာသေးခင်ကပဲတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၄င်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Information တွေကိုတော့တစ်ခုမှထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Smart Product တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ခန့်မှန်းကောလဟာလသတင်းတွေကတော့ထွက်ပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
တရားဝင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပုံအရ Mi Band3ရဲ့ Design ဟာ ယခင် Mi Band2ရဲ့ပုံစံနဲ့တော့ သိပ်ပြီးကွာခြားချက်မရှိပါဘူး။ ထူးခြားသွားတာကတော့ ယခင်မြင်နေကျ Home Button ပါဝင်ခြင်းမရှိတော့တာပါပဲ။ Mi Band2ထက်ပိုလာတဲ့ Function တွေကတော့ NFC စနစ်ပါဝင်လာပြီး ငွေပေးချေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်သလို IP67 Ratingကြောင့် ရေစိုခံနှိုင်မှုနဲ့အကြမ်းခံမှုတို့မှာ စံတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်လာပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ Touch Screen နဲ့ Gesture စနစ်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။( Screen ကိုကြာကြာဖိထားတာ၊ အပေါ်ကိုမတင်လိုက်တာ၊ အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တာ အစရှိသဖြင့်ပေါ့)
Mi Band3ထွက်ရှိမယ့်အချိန် ?
Mi Band2ရဲ့ Launch History ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဂျွန်လ ၇က်နေ့မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Mi Band3ကိုမိတ်ဆက်ဖို့အတွက် Chinese Manufacturer တွေအနေနဲ့ ရက်အတိအကျသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မေလအတွင်းမှာ တွေ့မြင်ရဖို့ သေချာသလောက်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ ဒီစာကိုရေးနေတဲ့အချိန်အထိ ကောလဟာလအနေနဲ့တောင် မသိရသေးပါဘူး။
Mi Band ဆိုတာကတော့ Xiaomi ကထုတ်ထားတဲ့ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုလက်ပတ်နာရီတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလက်ပတ်ဖြင့် အိပ်ချိန်၊ လမ်းလျှောက်နှုန်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်း အစရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ Mi Band ကို 22 July 2014 မှာ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်မှာတော့ Mi Band2ဟာ နောက်ဆုံးထွက်ထားတာဖြစ်ပြီး Series သစ်ထပ်မထွက်တဲ့အချိန်အားဖြင့် ၂ နှစ်တာနီးပါးကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Mi Band3မှာ IP67၊ Touchscreen Display၊ Gesture နဲ့ NFC စနဈတှပေါဝငလြာဖှယရြှိ
Xiaomi ရဲ့ CEO Lei Jun ဟာ Black Shark Gaming Phone ကိုမိတဆြကတြုနြးက အမွိုးအမညမြသိ Smartband တဈခုကိုဝတဆြငထြားခဲ့ပါတယြ။ အဆိုပါ Smartband ဟာ Mi Band3ဖှဈနိုငဖြို့သခွောသလောကပြါပဲ။
Xiaomi ဟာ Mi Band3နဲ့ပတသြကတြဲ့ Official Teaser တဈခုကိုမကှာသေးခငကြပဲတငခြဲ့တာဖှဈပှီး ၎င်းငျးငြးနဲ့ ပတသြကတြဲ့ Information တှကေိုတော့တဈခုမှထည့သြှငြးဖောပြှထားခှငြးမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပမယြေ့ Smart Product တှရေဲ့ ထုံးစံအတိုငြး ခန့မြှနြးကောလဟာလသတငြးတှကတေော့ထှကပြေါနြပှေီဖှဈပါတယြ။
တရားဝငထြှကပြေါလြာတဲ့ပုံအရ Mi Band3ရဲ့ Design ဟာ ယခငြ Mi Band2ရဲ့ပုံစံနဲ့တော့ သိပပြှီးကှာခှားခကွမြရှိပါဘူး။ ထူးခှားသှားတာကတော့ ယခငမြှငနြကွေ Home Button ပါဝငခြှငြးမရှိတော့တာပါပဲ။ Mi Band2ထကပြိုလာတဲ့ Function တှကတေော့ NFC စနဈပါဝငလြာပှီး ငှပေေးခွတေဲ့ဝနဆြောငမြှုတှကေိုဆောငရြှကနြိုငမြှာဖှဈသလို IP67 Ratingကှောငြ့ ရစေိုခံနှိုငမြှုနဲ့အကှမြးခံမှုတို့မှာ စံတဈခုအနနေဲ့ပါဝငလြာပါတယြ။ နောကတြဈခကွကြတော့ Touch Screen နဲ့ Gesture စနဈတှကေိုအသုံးပှုနိုငလြာမှာဖှဈပါတယြ။( Screen ကိုကှာကှာဖိထားတာ၊ အပေါကြိုမတငလြိုကတြာ၊ အောကကြိုဆှဲခလွိုကတြာ အစရှိသဖှင့ပြေါ့)
Mi Band3ထှကရြှိမယ့အြခွိနြ ?
Mi Band2ရဲ့ Launch History ကိုပှနကြှည့မြယဆြိုရငြ ဂွှနလြ ၇ကနြမှေ့ာမိတဆြကခြဲ့တာကိုတှရေ့မှာပါ။ Mi Band3ကိုမိတဆြကဖြို့အတှကြ Chinese Manufacturer တှအနေနေဲ့ ရကအြတိအကသွတမြှတထြားခှငြးမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပမယြေ့ မလအေတှငြးမှာ တှမှေ့ငရြဖို့ သခွောသလောကရြှိနပှေီလို့ဆိုပါတယြ။ ဈေးနှုနြးကတော့ ဒီစာကိုရေးနတေဲ့အခွိနအြထိ ကောလဟာလအနနေဲ့တောငြ မသိရသေးပါဘူး။
Mi Band ဆိုတာကတော့ Xiaomi ကထုတထြားတဲ့ ကနြွးမာရေးအထောကအြကူပှုလကပြတနြာရီတဈမွိုးပဲဖှဈပါတယြ။ အဆိုပါလကပြတဖြှငြ့ အိပခြွိနြ၊ လမြးလွှောကနြှုနြး၊ နှလုံးခုနနြှုနြး အစရှိတဲ့အခကွအြလကတြှကေိုဖောပြှပေးနိုငပြါတယြ။ Mi Band ကို 22 July 2014 မှာ ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့ စတငထြုတလြုပခြဲ့တာဖှဈပှီး ယခုအခွိနမြှာတော့ Mi Band2ဟာ နောကဆြုံးထှကထြားတာဖှဈပှီး Series သဈထပမြထှကတြဲ့အခွိနအြားဖှငြ့ ၂ နှဈတာနီးပါးကှာခဲ့ပှီဖှဈပါတယြ။